IELTS – BSI Learning Academy
Home Programs IELTS
IELTS ဟာ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ့်သူများနဲ့ သွားရောက်အခြေချနေထိုင်သူများ ဖြေဆိုလေ့ရှိကြတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS ကို သြစတြေးလျ၊ အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေက ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ဗီဇာလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ IELTS ကို ဖြေဆိုဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရာမှာ အောင်မှတ်ရယ်လို့ သီးသီးသန့်သန့် မရှိပါဘူး။ အမှတ်တွေကို ပေးတဲ့အခါမှာ Band 1 ကနေ Band9အကြားပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲလာမဖြေသူများကိုတော့ Band0ပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲရမှတ်များဟာ ၂ နှစ်အတွင်းမှာပဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အကယ်၍ စာဖြေသူဖက်က သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု ကျဆင်းသွားခြင်း မရှိပါဘူးဆိုတာကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြသနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၂ နှစ်ကျော်လွန်သွားတဲ့ IELTS Score ကို လက်ခံပေးပါတယ်။
IELTS ကို ၂၀၁၂ တုန်းက ၂ သန်းကျော်၊ ၂၀၁၁ မှာ ၁.၇ သန်း၊ ၂၀၀၉ မှာ ၁.၄ သန်း စသည်ဖြင့်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ IELTS ကို ဖြေဆိုကြသူ ၃ သန်းကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ က ဖြေဆိုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ တစ်နှစ်တည်းနဲ့ ဖြေဆိုသူ ၁ သန်းရှိခဲ့တာမို့ ကမ္ဘာမှာ အထင်ပေါ်ဆုံး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
IELTS စာမေးပွဲ မေးခွန်းလွှာမှာ အပိုင်းလေးပိုင်း ပါရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Listening, Reading, Writing and Speaking တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS Module နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Academic (ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ) နဲ့ General Training (ယေဘုယျကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Speaking နဲ့ Listening ဟာ Modules နှစ်ခုလုံးမှာ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Reading နဲ့ Writing မှာတော့ ကွာခြားသွားပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မည့်သူများ၊ ပရိုဖက်ရှင်နယ် လိုင်စင်စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ (ဥပမာ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ အင်ဂျင်နီယာ စသည်ဖြင့်)၊ မဟာတန်း (သို့) ပါရဂူတန်း တက်ရောက်မည့်သူများအနေနဲ့ Academic Module ကို ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွားရောက်အခြေချ နေထိုင်မည့်သူများ၊ တက္ကသိုလ်အဆင့် မဟုတ်တဲ့ အခြေခံပညာအဆင့်မှာ ပညာသင်ကြားမည့်သူများ အနေနဲ့ကတော့ General Module ကို ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
IELTS is the world’s most popular English test for higher education and global migration. It is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian and New Zealand academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. IELTS is the only Secure English Language Test approved by UK Visas and Immigration (UKVI) for visa customers applying both outside and inside the UK.
In IELTS, there are four papers: Listening, Reading, Writing and Speaking. There are two different IELTS modules: Academic and General Training. The Speaking and Listening tests are the same in both modules, but the Reading and Writing tests are different. Choose Academic module if you wish to study at undergraduate or postgraduate levels; or if you are seeking professional registration, e.g. doctors and nurses. Choose General Training module if you wish to migrate to an English-speaking country or if you wish to train or study at below degree level.